बैंकिङ खबर – Page5– Banking Khabar
ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ शाखारहित बैंकिङ सेवा उदयपुरको चुहाडेमा
बैंकिङ खबर । ग्लोबल आइएमई बैंकले उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका ७ चुहाडेमा शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवाहरुको उद्घाटन स्थानीय जनप्रतिनिधि, बुद्घिजीवि तथा स्थानीय वासीहरुको रोहवरमा भएको छ । उक्त शाखारहित बैंकिङ सेवा बैंकको गाईघाट …
आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
बैंकिङ खबर । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष किरण कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारण सभाले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन सहित विविध प्रस्ताबहरु पारित गरेको छ । …
कामना सेवा विकास बैंकको नयाँ शाखा काठमाडौंको गोंगबुमा
बैंकिङ खबर । कामना सेवा विकास बैंकले टोखा नगरपालिकाको गोंगबमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । उक्त नयाँ शाखाको उद्घाटान बैंकका संचालकद्वय देव कृष्ण काफ्ले र विश्वेश्वर सुवेदी तथा कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण बस्नेतले संयुत्त रुपमा गरे । कार्यक्रममा …
सिभिल बैंकमा अनलाईन खाता खोले एक सय रुपैयाँ पाइने
बैंकिङ खबर । सिभिल बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखि अनलाईन अकाउन्टको सुरुवात गरेको छ । उक्त अनलाईन अकाउन्ट सुबिधा बैंकको स्मार्ट बेवसाइट http://wwww.civilbank.com.np/ तथा “को बन्छ करोडपति”(KBC)को मोबाईल एप मार्फत उपलब्ध गराइएको छ । जसमा ग्राहकहरुले आफ्नो ब्यक्तिगत बिबरण उल्लेख …
उदयपुरको देउरीमा एनआईसी एशिया बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा
बैंकिङ खबर । एनआईसी एशिया बैंकले उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. ५ देउरीमा शाखारहित बैंकिङ सेवा संचालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखारहित बैंकिङ सेवाको समुद्घाटन त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष उद्धब थापाल गरे । शाखारहित बैंकिङ …
बाराको अमृतगंजमा कृषि विकास बैंकको अनलाईन बैकिङ सुरु
बैंकिङ खबर । कृषि विकास बैंकले बारा जिल्लाको अमृतगंजमा अनलाईन बैकिङको सुरुवात गरेको छ । अनलाईन बैंकिङको उद्धाटन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्याय र सिमरौनगढ नगरपालिकाका मेयर विजय कुमार यादवले सयुक्त रुपमा गरे । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत …
माछापुच्छ्रे बैंकको दुई नयाँ शाखा विस्तार
बैंकिङ खबर । माछापुच्छ्रे बैंकले दार्चुलाको अपि हिमाल र ब्याँस गाउँपालिकामा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकले पौष २९ गते दार्चुलाको अपि हिमाल गाँउपालिका स्थित अपि हिमाल शाखा कार्यालय र ब्याँस गाँउपालिका स्थित ब्याँस शाखा कार्यालयको औपचारिक सुरुवात गरेको …
सिर्जना फाइनान्सको २४.५ % लाभांश पारित, राष्ट्रिय स्तरमा जाने
बैंकिङ खबर । सिर्जना फाईनान्सले आफ्ना सेयरधनीलाई २४.५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । संस्थाको बार्षिक सधारणसभासभाले २०७५ असारमसान्तको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र ९.५ प्रतिशत नगद लाभांश बितरण गर्ने प्रस्ताब पारित गरेको हो । चालु आर्थिक बर्षमा …
हिमालयन बैंकको मास्टरकार्डमा आधुनिक प्रविधियुक्त चिपको प्रयोग
बैंकिङ खबर । हिमालयन बैंकले डेबिट कार्डमा अत्त्याधुनिक र सुरक्षित चिप र पिन प्रयोग गरेको छ । ग्राहकहरुको सेवालाई ध्यानमा राखि अन्तराष्ट्रिय कार्ड प्रदायक मास्टरकार्डले उपलब्ध गराउने प्रविधि प्रयोग गरेको बैंकले जनाएको छ । उक्त कार्डको उद्घाटन बैंकका प्रमुख कार्यकारी …
जाजरकोटको डल्लीबजारमा एनआईसी एशिया बैंकको नयाँ शाखा
बैंकिङ खबर । एनआईसी एशिया बैंकको नयाँ शाखा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका वडा नं ७,जाजरकोट स्थित डल्लीबजारमा स्थापना गरेको छ । नयाँ शाखाको उद्घाटन नलगाड नगरपालिकाका नगर प्रमुख टेक बहादुर रावलले गरे । बैंकले मुलुकभर २७० शाखा कार्यालय, २८९ एटिएम, ३७ …
पूर्णिमा विकास बैंकको ११.३७ प्रतिशत लाभांश पारित
बैंकिङ खबर । पूर्णिमा विकास बैंकले चुक्ता पुन्जीको ११.३७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकको बार्षिक साधारणसभाले ३ करोड ४ लाख ५९ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ २४ पैसा नगद लाभांश, २ करोड ६२ लाख ५१ हजार …
बैंकिङ खबर। अब बैंकको संचालक समितिले छनौट गरेकै भरमा मात्रै सिईओ नियुक्त नहुने भएको छ। सिईओ नियुक्तिका लागि अब राष्ट्र बैंकले अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर मात्रै सिईओ नियुक्ति गर्न पाइने छ। हाल संचालक समितिको …
राजश्व बुझ्न शनिवार पनि बैंकका काउण्टर खुल्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि राजश्व जम्मा हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा तथा काउण्टर शनिबार पनि संचालनमा आएका छन् । शनिबार राजश्व बुझ्ने प्रयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा तथा काउण्टर पूरै समय खुला राख्न र नियमितरुपमा राजस्व बुझ्न …
छिट्टै सबै स्थानीय तहमा पुग्दै बैंकहरु
बैंकिङ खबर । छिटै नेपालका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिती पुग्ने भएको छ । हाल ६९९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगिसकेका छन् । ७५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउने सरकारी योजना अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले १८ महिना …
ग्लोबल आइएमई बैंकको १६ प्रतिशत बोनस सेयर पारित
बैंकिङ खबर । ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकको १२औँ बार्षिक साधारण सभाले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को वितरण योग्य मुनाफा तथा संचित मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १६ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव …